Nezvedu - Tspringwater Co., Ltd.
Isu tinopa mbatya dzemachira senge Swimwear, Beachwear, inosanganisa dhizaini, Underwear, Sexy Lingerie, Sportwear yevakadzi, varume nevana. Isuwo tinogona kugadzira mabhegi akasiyana senge Kukwira kurongedza, Lunch Bhegi, komputa bhegi.
Fekitori yedu haingoshandisa chete michina yemhando yepamusoro yekusonesa uye nehunyanzvi maitiro ekugadzira Apparel, asi zvakare inoshandisa vane ruzivo vashandi.Iye fekitori inogona kugadzira zvinopfuura 2000 pcs zvigadzirwa rimwe Day.Our kambani inopa zvipfeko zvemitambo munyika dzinopfuura makumi matanhatu nenomwe kune vanopfuura zviuru zvina mazana mashanu vatengesi vakavimbika. Isu hatisi chete kuita iyo ODM sevhisi, asi zvakare OEM sevhisi.
Kuremekedza vatengi, Kuvimbika, Chikwata kutanga
Chiono chekambani: Gadzira zvigadzirwa zvinozivikanwa zvemitambo pasi rese
Kambani bhizinesi uzivi: kutendeseka, kushandira pamwe, kuhwina-kuhwina mamiriro, kuvandudza!
Chimiro chekambani: Kufuridzira, Hutano, Tarisiro, Kushivirira, Kugovana, Kubatana, Kuonga.
Kambani basa: Gadzira kukosha kwevatengi, Ziva zviroto zvevashandi, Prosper yemunyika, uye ita zvisingaite kuedza kwekufara kwavo pamwe nemhuri dzavo.